समानान्तर अभिशप्त नियति कि नेताकाे दुर्नियत ?
बाह्रखरी - गोविन्द अधिकारी बिहीबार, वैशाख ३०, २०७८
नेपालीले सास्ती पाइरहेकै थिए । ‘जरासन्ध’को जन्मले थप अनिष्टकाे सङ्केत गरेकै थियाे । खड्गप्रसाद ओलीकै पाखण्डतन्त्रमा काेभिड-१९ काे महामारी थपियाे । महामारीमा ओली र उनका मन्त्री, सन्त्रीहरू जनतालाई ढाँट्न र मुलुककाे ढुकुटी लुट्न व्यस्त रहे । महामारी कालमा ओलीतन्त्रकाे निषेध, अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, बेथिति सबैले भाेगेकै छन् । लेख्नै पो किन पर्ला र ?
महामारी त बेथितिकाे नाम सुन्न पनि मन नलाग्ने भइसक्याे । नेपाली जनता यति निरीह सायद पहिले कहिल्यै भएका थिएनन् । भूतसँग डराउनेहरू भूतकाे कथा सुन्न पनि डराउँछन् । यसैले पनि काेभिडकाे कहरका कुरा छाडेर राजनीति नामकाे पाखण्डकाे प्रसङ्ग निकालेकाे ।
‘संसद्मा बहुमत पुर््याउनै धाै धाै छ । संसद्कै आकारै सानाे भएमात्र सरकार बनाउन सङ्ख्या पुग्छ । अर्काे लामाे धर्काे तान्ने ठाउँ छैन मेटेर छाेटाे पारेमात्र लामाे होइने हाे । त्यसमाथि बहुमत पुगे नै पनि राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन बाेलाउनुकाे साटाे लुम्बिनी, गण्डकीमा परिक्षण गरी सफल भएकाे विधि अपनाउँदिनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यस्ताेमा किन मरिहत्ते गर्नू ?’
सायद नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यही सोचेर ओली संसद्मा अल्पमतमा नपर्दासम्म अर्को सरकार बनाउन खासै चासाे देखाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बहुमत गुमाएपछि प्रमुख विपक्षले सरकार बनाउने चेष्टा त गर्ने नै भयाे । तर, नियतिले जनादेशकै सम्मान गर्ने संकेत देखाएकाे छ ।
(भन्नेहरू त ओलीसँग भागबन्डाकाे ‘सेटिङ’ मिलेकाले देउवाले उनलाई हटाउन जाँगर नदेखाएका हुन् पनि भन्छन् । तर, सरकार बनाउन सांसद रिझाउने खेल कति कठिन र घातक हुनसक्छ भन्ने थाहा पाएकैले ओली अन्यमनस्क देखिएका हुनुपर्छ । यसले सायद, व्यक्तिगतरूपमा देउवालाई हानि भएकाे छैन ।)
लागेकाे थियाे महन्थ ठाकुर ओलीकाे अधिनायकवादी हैकमविरुद्ध सबैभन्दा अगिल्लाे पङ्क्तिमा हुनेछन् । जीवनकाे उत्तरार्धमा सैद्धान्तिक राजनीतिक ‘आत्महत्या’ गरेर उनले पाउने पाे के हाे र ? साथै अकारण त्यस्ताे लागेकाे पनि हाेइन ।
पहिलाे कारण- लाेकतान्त्रिक आन्दाेलनमा जीवन समर्पण गरेका थिए ठाकुरले । अहिले देखिएका शीर्ष नेतामा पनि सम्भवतः सबैभन्दा वरिष्ठ हुन् महन्थ ठाकुर । लाेकतन्त्रप्रतिकाे निष्ठा, त्याग, समर्पण, सादगी प्रतिबद्धताका प्रतिमूर्ति थिए यी ।
दाेस्राे - पोहोरमात्रै ओलीले यिनकाे पार्टी फुटाउन अध्यादेश जारी गराएका थिए । ढिलै लागे पनि मधेस आन्दाेलनका पर्याय बनेका ठाकुर र कुनै बेला मधेसको नाम सुन्न पनि नरुचाउने ओली विपरीत ध्रुवजस्ता लाग्थे । यी दुई यसरी ‘दाे जिस्म मगर एक जान’ हाेलान् भनेर साेच्न पनि सकिँदैन थियाे ।
आश्चर्य, लाेकतन्त्र जाेगाउने कि त्यसलाई ‘जाेकतन्त्र’ बनाउने निर्णायक घडीमा त महन्थ ठाकुर ओलीकाे अनुहारमा पो प्रकट भए ।ओलीकाे मन्त्री भइसकेका पुराना कम्युनिस्ट उपेन्द्र यादवले लाेकतन्त्रकाे साटाे जाेकतन्त्र राेजेका भए बरू अनाैठाे लाग्ने थिएन ।
भानुभक्तकाे रामायणकाे यी पङ्क्तिमा भनिएजस्तै पो भयाे त -
“वाणीले ति भुलाइयाकि छँदि लौ भन्दी भइन् कैकयी।
राम्लाई वनवास् भरत् कन त राज माग्छू म चाँडो गई॥”
अर्थात्, ओलीकाे निरङ्कुशतन्त्रकाे काँध थाप्न महन्थ ठाकुर पो आइपुगे !
शपथकाे ‘हाेम डेलिवरी’ पनि जारी छ । लुम्बिनीमा भन्दा गण्डकीमा केही सुधारियाे । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री खोज्दै प्रदेश प्रमुख शपथ गराउन गएका थिए भने गण्डकीमा ‘होम आइसोलेसन’मा बसेका मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाइयाे । काठमाडाैंमा पनि बहुमत हैन ठूलाे दलकाे यही माेडल दोहोर्‍याउने हाे भने शपथ ग्रहण कता होला ? खुलदुली छ ।
अर्काे खुलदुली छ - नेपाल खनाल समूहले के गर्ला ? राजीनामा सजिलाे बाटाे त हाेइन । त्याग एमाले नेताहरूकाे सस्कार र अभ्यास पनि हाेइन । नत्र, वैशाख २७ भन्दा पहिले नै उनीहरूले संसद्बाट राजीनामा गर्थे होलान् । भर्खरै एमालेले माधव नेपालहरूमाथि गरेकाे कारबाही फिर्ता लिएकाे समाचार सार्वजनिक भएकाे छ । याे बल्छी नेपालहरूका लागि त निल्नु न ओकाल्नु हुन्छ होला तर निसाना भने जसपामा लाग्नुपर्छ । महन्थ जीहरूकाे ‘पलडा’ अलिकति भारी होला अब । एमाले एकै ठाउँमा भयो भने त १५ थपे १३६ पुगिहाल्छ नि !
पार्टीकाे ह्विप उल्लङ्घन गरिसकेपछि केकाे माेह ? ओलीकाे जाेकतन्त्रबाट नेपालकाे लाेकतन्त्रलाई हानि हुन्छ र विधिकाे शासनकाे रक्षाका लागि आवश्यक देखिएकाे त्याग पनि गर्नुपर्छ भन्ने लागे तिनले अविलम्ब पदबाट राजीनामा गर्नुपर्थ्यो । ढिलाे गरे भने तिनकाे पद जाने ओली नजाने होला नि !
भन्न त - ‘‘त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्। ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्॥’’ भन्छन् । तर, लाेकतन्त्रभन्दा पार्टी र पद ठूलाे ठान्ने हाे भने याे सूक्ति सम्झे पनि भयाे -‘‘सर्वनाशे समुत्पन्ने ह्यर्धं त्यजति पण्डित: | अर्धेन कुरुते कार्यं सर्वनाशो हि दु:सह: || ’’
त्यसो त, ओली रूपी ‘समुद्री बूढाे’लाई माैका परेका बेला हुत्याउन नसके बूढोले संसद् रूपी ‘सिनवाद’काे घाँटी थिच्ने निश्चितै छ ।
विडम्बना, माधव नेपालहरूले राजीनामा गरेर संसद् जाेगिए आफू गइने तर राजीनामा नगरेर ओली जोगाए संसद् जाने । अर्थात्, उनीहरुका लागि त ‘भिरबाट लडे पनि बाघले खाए पनि किलो रित्तै’ ।
जे गर्ने हो सबैले छिटाे गर । सबैभन्दा त जनता समाजवादी पार्टीले अलमल छाड । सके पार्टी एक भएर ओली हटाऊ । नभए पार्टी फुटाएर ओली बचाऊ । जे गरे पनि लेखाजोखा राख्ने जनताले हो राख्लान् । ठाकुर र यादवकाे प्रतिष्ठाकाे प्रश्न नबनाऊ ।
शेरबहादुर देउवा यसै बदनाम छन् अपारदर्शी सहमति गरेर थप कलङ्कित नहाेऊन् ।
नेपालकाे नियति नै अभिशप्त हो कि नेतृत्व गर्नेहरूकाे बदनियतले नेपाली जनताले लाञ्छना र सास्ती सहन परेकाे हाे ? इतिहासले कुनै न कुनै दिन त यस प्रश्नकाे उत्तर देला नि !